Ezothutho eMelika | Ukuhamba kwe-Absolut
I-United States lilizwe elikhulu elidityaniswe kakuhle ngaphakathi ngeendlela ezahlukeneyo zothutho ezinje ngololiwe, inqwelomoya, imoto kunye nebhasi.
Inethiwekhi yothutho yase-US isebenza kakuhle ngokwemiqathango ngokubanzi kwaye ikuvumela ukuba ujikeleze ilizwe ngokukhululekileyo kwaye ngokukhawuleza. Ukuba ucwangcisa uhambo oluya eUnited States kwaye ufuna ukwazi ukuba ungahamba njani ukusuka elunxwemeni uye elunxwemeni, ungaphoswa leli nqaku apho sichaza khona Zeziphi iindlela zothutho eMelika.
1.1 Uhamba nini ngenqwelomoya eMelika?
1.2 Iinqwelo-moya onokuhamba nazo
2.1 Kuthatha ntoni ukuqhuba eUnited States?
2.2 Yintoni ekufuneka uyazi ukuqhuba eUnited States?
3 Ukuhamba koluntu eUnited States
3.2 Zinjani oololiwe eMelika?
3.3 Loluphi uhambo olwenziweyo ngololiwe eMelika?
3.5 Zeziphi iinkampani eziphambili zebhasi?
Inqwelomoya yeyona ndlela ilula yezothutho yokuhamba ngaphakathi kwelizwe ukusuka kwelinye ilizwe ukuya kwelinye ukusukela ukuba uthungelwano lwenqwelomoya lwelizwe lubanzi kwaye luthembekile ngamawaka eenqwelomoya mihla le, iinqwelomoya ezininzi kunye namakhulu eeenqwelo moya. Uninzi lweedolophu ezinkulu zineenqwelomoya esinye seenqwelomoya kunye neenqwelo moya ngqo kunye nonxibelelwano olukhoyo.
Ilizwe likhulu kakhulu ke ukuba xa kukho apho ufuna ukuhamba ukusuka elunxwemeni ukuya kunxweme ngexesha elifutshane, kungcono ukuthatha inqwelo moya njengoko uhambo luza kukuthatha ngaphantsi kweeyure ezintandathu xa kuthelekiswa nohambo lweentsuku ezininzi olubandakanya uhamba ngololiwe okanye ngemoto.
Uhamba nini ngenqwelomoya eMelika?
Ukuba ujonge ukugcina imali ngeetikiti zakho zeenqwelomoya, eyona nto unokuyenza kukucwangcisa uhambo lwakho kwangaphambili. Kwiintsuku zakudala, iinqwelomoya zazizama ukususa izihlalo ezigqithileyo ngomzuzu wokugqibela, ke kuye kwafuneka ulinde ixesha elide ukufumana amatikiti amaxabiso aphantsi. Nangona kunjalo, namhlanje imeko itshintshile kwaye kukho iinqwelomoya ezihlala zinika abahambi amaxabiso angcono.
Ngamaxesha athile anje ngekhefu lasentwasahlobo, ihlobo okanye usuku oluphambi kweeholide kunye neeholide zebhanki, ukulinda kude kube ngumhla wokugqibela wokufumana amatikiti omoya kungabiza kuba lixesha eliphezulu kwaye ukuhamba ngenqwelomoya eMelika kubiza kakhulu. Ukuba unethuba lokuhamba uye eUnited States ngexesha eliphantsi, yeyona icetyiswayo kuba amatikiti endiza abiza ixabiso eliphantsi. Kuyafana nokuhamba ngeentsuku zeveki endaweni yeempelaveki. Ngale ndlela uza konga imali eninzi.
Iinqwelo-moya onokuhamba nazo
Ezinye zeenqwelo-moya zesizwe ezisebenza e-United States zezi: I-American Airlines, iDelta Air, i-United Airlines, i-US Airways, i-Skywest Airlines, i-Southwest Airlines, i-Hawaiian Airlines okanye i-Virgin America.
Onke amazwe eli lizwe aneenqwelomoya ezininzi ezibhabhela kwizixeko ezahlukileyo yonke imihla. Ngapha koko, iUnited States inezikhululo zeenqwelo moya ezingama-375.
Xa ujikeleza eUnited States ngeholide, abahambi abaninzi bakhetha imoto kuba inokuba yinto entle. Kwaye kunjalo Olunye lweendlela ezaziwa kakhulu kweli lizwe yiNdlela 66 ikwaziwa njenge "isitalato esikhulu eMelika."
Phantse kwi-4.000 yeekhilomitha ubude, i-Route 66 inqumla ilizwe ukusuka empuma ukuya entshona kumazwe asibhozo (e-Illinois, eMissouri, eKansas, e-Oklahoma, eTexas, eNew Mexico, eArizona naseCalifornia) ukusuka eChicago ukuya eLos Angeles. Ukwenza indlela ngemoto okanye ngesithuthuthu luhambo lokuphupha kubantu abaninzi. Nangona kunjalo, Ukujikeleza i-United States ngemoto kufuneka uyazi ukuba uqhuba njani apho kuba umthetho wayo unokwahluka kuleyo yelizwe lakho.
Kuthatha ntoni ukuqhuba eUnited States?
Ukuba uhamba njengomkhenkethi, kwiindawo ezininzi uyakufuna ilayisensi yokuqhuba yamanye amazwe. Mhlawumbi xa uyokurenta imoto abayi kuyicela kodwa ukuyithatha akubuhlungu kuba kulula ukuyifumana.
Umzekelo, kwimeko yeSpain ukuze uyifumane kuya kufuneka ubenephepha-mvume lokuqhuba elisemthethweni kwaye inkqubo inokwenziwa ngokukhawuleza kwi-Intanethi. Into oyifunayo sisazisi se-elektroniki, gcwalisa ifom yokucela imvume kwaye uhlawule imirhumo. Kwiintsuku ezimbini kamva ungayithatha nakweyiphi na i-ofisi yezendlela ebonisa isazisi sakho ukuze uzichonge kunye nefoto yombala yangoku eyi-32 x 26 mm. Nje ukuba ikhutshwe, iphepha-mvume lokuqhuba lehlabathi liba nexesha elisemthethweni lonyaka omnye.
Khumbula ukuba ukuqasha imoto eUnited States ubuncinci beminyaka yobudala efunekayo yiminyaka engama-21, nangona kwamanye amazwe kunokuba yiminyaka engama-25.
Yintoni ekufuneka uyazi ukuqhuba eUnited States?
Ngaphandle kokuba ulilizwe elinamasiko ama-Anglo-Saxon, e-United States uqhuba ngasekunene, kwicala elifanayo lendlela kuninzi lwamazwe aseYurophu naseSpain. Nangona kunjalo, kufuneka sikhumbule ukuba ilizwe ngalinye linemigaqo eyahlukeneyo yezithuthi. Ke, Ngaphambi kokuba uqale uqhube, kufuneka ufumanise malunga neempawu zendlela kunye nomda wesantya kwilizwe oza kulityelela.
Kwelinye icala, i-United States lilizwe elinemimandla emikhulu yomhlaba omncinci apho kulawula indalo yasendle, ke ukuba awuyazi indawo ekulula kuyo ukubuyela umva kwaye ulahleke. Ukuthintela oku, ukuba uza kuqesha imoto eMelika, qiniseka ukuba uneGPS ehlaziye iimephu zendlela.
Ukuhamba koluntu eUnited States
Enye indlela yokuhamba ujikeleze iUnited States ngololiwe. Olukhetho olufanelekileyo ukuba unexesha elininzi lokuhamba, ukuba awunayo ilayisensi yokuqhuba yamazwe aphesheya okanye ukuba awufuni kubenza nzima ubomi bakho ngeGPS kunye nezalathiso xa uqasha imoto. Yintoni egqithisile, Ukuba ukhetha uloliwe oza kujikeleza eUnited States, into eluncedo kukuba ungonwabela ubuhle bembonakalo yomhlaba (amadlelo amakhulu, iintaba eziphakamileyo kunye neelali ezintle) ngelixa uhamba kamnandi uhleli phantsi.
E-United States, onika le nkonzo ngu-Amtrak, umqhubi kaloliwe wesizwe odibanisa uMntla Merika ngenkqubo yeendlela ezingaphezu kwama-30 oololiwe bakhe abaya kwiindawo ezingaphezu kwama-500 kumazwe angama-46 naseWashington DC
Enkosi kunxibelelwano olwahlukileyo phakathi kwezixeko eziphambili eUnited States, ukuba uthatha isigqibo sokuhamba ngololiwe ungahamba ngololiwe ukuya eNew York, ePhiladelphia, eBoston, eChicago, eWashington DC, eLos Angeles naseSan Francisco. Ezinye izixeko zeli lizwe zinokuba neendlela ezincinci zendlela enye okanye ezimbini zoololiwe zokuhamba ujikeleze iziko.
Ukongeza, iidolophu ezininzi zeli lizwe zineenkqubo zoololiwe basezidolophini ezihlala zibonelela ngokudibana kwizikhululo zikaloliwe zasekuhlaleni kwaye zihamba phakathi kweedolophu kunye neendawo ezikufuphi.
Zinjani oololiwe eMelika?
Uninzi loololiwe baseAmtrak banezihlalo eziphangaleleyo zokolula imilenze kunye nokuphumla, ngeWi-Fi yasimahla, izindlu zangasese kunye nokutya. phakathi kwezinye iinkonzo. Ukongeza, kolo hambo lunemigama emide kakhulu kukho iinqwelo ezinamagumbi okulala.
Loluphi uhambo olwenziweyo ngololiwe eMelika?
Phakathi kweendlela u-Amtrak azinika abakhweli, zimbini ezithi, ngenxa yokwahluka kwazo, zibe ngamava amnandi kakhulu: uloliwe waseCalifornia Zephyr (olandela umendo abathe babheka igolide bawenza ngasentshona ngakwimimandla esi-7 yeendawo ezintle) okanye uloliwe weVermonter (ukubona iindawo ezintle zaseNew England, izixeko zayo ezinembali kunye neecawe zayo ezinemikhombe emhlophe).
Enye yeendlela ezisetyenziswayo kwezothutho eUnited States ukuhambahamba ilizwe yibhasi. Izizathu zokuyikhetha zininzi: iintlobo ngeentlobo zeenkampani ezibonelela ngenkonzo ngamaxabiso alo lonke uhlahlo-lwabiwo mali, unxibelelwano oluhle phakathi kweedolophu ezininzi kunye nezithuthi ezicocekileyo, ezikhululekileyo nezikhuselekileyo.
Uninzi lwezixeko ezikhulu zineenethiwekhi zebhasi ezinokuthenjwa, nangona inkonzo ngeempelaveki nasebusuku inqunyelwe.
Ukuba ixesha alisiyongxaki, ibhasi inokuba yeyona ndlela inomdla wokuphonononga ilizwe njengoko likuvumela ukuba ubone ezona ndawo zikude kunye neendawo ezihluke kakhulu ezingenakwenzeka ukuba uyenze ngenqwelomoya.
Zeziphi iinkampani eziphambili zebhasi?
IGreyhound: yinkampani yebhasi ekumgama omde ehlanganisa iindlela zelizwe lonke kunye neCanada.
IBoltbus: isebenza ikakhulu kumantla mpuma (uninzi lwelizwe laseNew England nelaseNew York phakathi kwezinye iindawo).
I-Megabus: le nkampani idibanisa ngaphezulu kweedolophu ezingama-50 kwaye ineendlela eziya eCanada. Unamaxabiso akhuphisanayo.
IVamoose: enye yezona zisetyenziswa kakhulu ngabo bahamba phakathi kweWashington neNew York rhoqo.
Ayisiyondlela yokuhamba esetyenziselwa ukuhamba phakathi kwezixeko kodwa kwindawo enye. Zonke izixeko ezikhulu eUnited States zinenqwaba yeeteksi. Kwizikhululo zeenqwelo moya kuhlala kulula ukuthatha iteksi kuba zininzi ezithatha abakhenkethi kumbindi wedolophu, kodwa ngokuchaseneyo kunzima kakhulu kwaye akusoloko kulula ukufumana enye yasimahla.
Ngokuchasene nento abantu abaninzi abakholelwa kuyo, iiteksi eNew York azibizi kakhulu. Ixabiso eliqhelekileyo lohambo oluqhelekileyo ngeManhattan lumalunga ne-10 yeedola kodwa ukuba ungxamile, ndincoma ukuba ujonge ezinye iindlela ezinje ngomgaqo ongaphantsi komhlaba kuba ukugcwala kwabantu eManhattan kunokuba sisiphithiphithi kwaye ukugcwala kwezithuthi kuthanda ukwenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Ezothutho eUnited States